Bit By Bit - Mifehy - 6.6.4 hanapa-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka
Tsy fahazoana antoka tsy voatery hitarika ho amin'ny tsy firaikan'ny.
Ny faritra fahefatra sy farany izay andrasako ireo mpikaroka hiady dia mandray fanapahan-kevitra eo anoloan'ny fisalasalana. Izany hoe, aorian'ny filozofa sy ny fandanjalanjana rehetra, ny etika fikarohana dia midika ho fanapahan-kevitra momba ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao. Indrisy anefa fa tsy maintsy atao amin'ny fanapahan-kevitra tsy feno izany fanapahan-kevitra izany. Ohatra, rehefa nanamboatra Encore, mety ho naniry ny hahafantatra ny mety hitrangan'ny polisy ny olona iray. Na, rehefa nanamboatra ny fifandraisana ara-pihetseham-po, mety ho naniry ny hahafantatra ny mety hahatonga ny fahaketrahan'ny mpandray anjara sasany ny mpikaroka. Mety ho ambany dia ambany ireo tebiteby ireo, saingy tsy fantatra raha vao nisy ny fikarohana. Ary, satria tsy nisy ny tetikasa navoaka ampahibemaso momba ny zava-nitranga mahatsiravina, dia mbola tsy fantatra hatramin'izao.
Ny tsy fahazoana antoka dia tsy miavaka amin'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika. Rehefa namaritra ny tetikasa Belmont momba ny risika sy ny tombony ny tatitra Belmont, dia niaiky mazava fa sarotra ny hamandrika marina izany. Na izany aza, dia mbola mafy kokoa ny fisalasalana amin'izao vanim-potoana nomerika izao, amin'ny ampahany satria tsy dia manana traikefa amin'ny karazana fikarohana isika ary ampahany noho ny toetoetran'ny fikarohana.
Raha jerena ireo tsy fitovian-kevitra ireo dia toa misy olona sasany miaro ny zavatra toy ny "tsara kokoa noho ny manenina", izay dika mitovy amin'ny fitsipika fisorohana . Na dia toa mihevi-tena araka ny antonony aza izany fomba fisainana izany-mety hendry mihitsy aza-mety hiteraka loza izany; Mandrisika hanao fikarohana izy; ary mahatonga ny olona hibanjina tsara ny zava-misy (Sunstein 2005) . Mba hahafantarana ireo olana amin'ny toro lalana voaaro, andeha hodinihintsika ny fifandraisana am-po. Ny fikasana dia nomanina hampiditra olona 700 000 eo ho eo, ary azo antoka fa hisy ny vintana mety hitranga amin'ireo olona ao anatin'ny fanandramana. Saingy nisy ihany koa ny fahafaha-manao izay ahafahan'ny fanandramana manome fahalalana izay mety ho an'ny mpampiasa Facebook sy ny fiarahamonina. Noho izany, raha toa ka nahafahana nampidi-doza ilay fanandramana (tahaka ny niresahana betsaka), ny fisorohana ny fanandramana dia mety ho loza ihany koa, satria mety ho nahalalany ny fahalalana manan-danja. Mazava ho azy, ny safidy dia tsy teo anelanelan 'ny fanaovana ny fanandramana niaingana fa tsy nanao ilay fanandramana; Maro ny fanovàna mety ho an'ny famolavolana izay mety ho nahatonga izany ho fifandanjana ara-moraly. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, ny mpikaroka dia hanana safidy amin'ny fanaovana fianarana fa tsy manao izany, ary misy ny loza ateraky ny fihetsika sy ny tsy fahampiana. Tsy mety ny mifantoka amin'ny loza mety hitranga. Raha ny marina fotsiny, tsy misy fomba tsy azo antoka ny fisorohana.
Miala ao ambadiky ny fitsipika fisorohana, ny fomba lehibe iray hieritreretana momba ny fanapahan-kevitra noraisina tsy fahazoana antoka dia ny fitsipi-pahasalamana ambany indrindra . Ity fitsipika ity dia manandrana manamarika ny mety hitrangan'ny fianarana manokana amin'ny loza mety hitranga ataon'ny mpandray anjara amin'ny fiainany andavanandro, toy ny milalao fanatanjahan-tena sy fiara mitondra fiara (Wendler et al. 2005) . Tena sarobidy io fomba fiasa io satria mora kokoa ny manombantombana raha toa ka mahafeno ny fepetra takian'ny fitsipiky ny risage avo indrindra ny fanombantombanana ny fisian'ny risika. Ohatra, ao anatin'ny fihetseham-po ara-pihetseham-po, talohan'ny nanombohan'ny fandalinana, ireo mpikaroka dia afaka nampitaha ny votoatin-tsarin'ny Feeds News tao amin'ny fanandramana tamin'ny Fehezin'ny vaovao hafa ao amin'ny Facebook. Raha nitovy tamin'izany izy ireo, dia afaka nanatsoaka hevitra ireo mpikaroka fa ny fanandramana dia nihoatra ny fari-pahaizana ambany indrindra (MN Meyer 2015) . Ary afaka manapa-kevitra io fanapahan-kevitra io na dia tsy fantany aza ny mety ho fisian'ny risika . Azo nampiharina tamin'ny Encore ihany io fomba io. Tamin'ny voalohany, Encore dia nitaky fangatahana tamin'ireo tranonkala fantatra amin'ny hoe manana fahamatorana, toy ny an'ireo vondrona politika voarara any amin'ny firenena manana governemanta mandainga. Noho izany, tsy dia zava-doza loatra ho an'ireo mpandray anjara any amin'ny firenena sasany. Na dia izany aza, ny votoatin'ny Encore-izay tsy mitongilana afa-tsy ny fangatahana amin'ny Twitter, Facebook ary YouTube-dia vetivety dia mety hitranga satria ny fangatahana amin'ireo tranonkala ireo dia trandrahana mandritra ny fanaraha-maso tsotra (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Ny hevitra faharoa manan-danja rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ny fianarana amin'ny risika tsy fantatra dia fanadihadiana momba ny herinaratra , izay ahafahan'ny mpikaroka manisa ny halehiben'ny ohatr'izy ireo izay ilainy mba hahitana ny vokatry ny habeny iray (Cohen 1988) . Raha toa ka mety hampisongadina ny mpandray anjara ny risika, na dia mety hampidi-doza aza ny fianaranao, dia ny soso-kevitra momba ny tombotsoany no manosika anao hametraka ny kely indrindra amin'ny risika ilaina hahatratrarana ny tanjon'ny fikarohana. (Eritrereto indray ny Ahena toro lalana ao amin'ny toko faha 4.) Na dia manana Misy mpikaroka mieritreritra be momba ny fanaovana ny fianarany araka izay lehibe araka izay azo atao, dia toa manondro fa fikarohana ny fitsipi-pitondrantena mpikaroka tokony hanao ny fianarany araka izay kely araka izay azo atao. Ny fanadihadihana herinaratra dia tsy zava-baovao, mazava ho azy, fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fomba nampiasana azy tamin'ny vanim-potoana sy ny fomba tokony ampiasana azy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, ny mpikaroka tamin'ny ankapobeny dia nanao fanadihadian'ny herinaratra mba hahazoana antoka fa ny fandalinan'izy ireo dia tsy dia kely loatra (izany hoe, ambany hery). Ankehitriny anefa, ireo mpikaroka dia tokony hanao fanadihadiana momba ny herinaratra mba hahazoana antoka fa ny fandalinan'izy ireo dia tsy lehibe loatra (izany hoe, matanjaka be).
Ny fandinihan-dresaka ho an'ny fari-pahaizan'ny minisma sy ny hery dia manampy anao handresy lahatra sy hanamboatra fianarana, saingy tsy manome vaovao vaovao momba ny mety hahatsapan'ny mpandray anjara ny fandalinanao izy ireo ary inona no mety hitranga amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Ny fomba iray hafa hifehezana ny tsy fahazoana antoka dia ny fanangonana vaovao fanampiny, izay mitarika ho amin'ny fanadihadiana ara-toekarena sy fitsapana fisedrana.
Ao amin'ny etika-valiny fanadihadiana, mpikaroka manolotra famaritana fohy ny naroso tetikasa fikarohana ary avy eo manontany fanontaniana roa:
(Q1) "Raha misy olona ianao miahy ireo kandidà mpandray anjara noho izany fanandramana, ho tianao izany olona mba ho tafiditra ho toy ny mpandray anjara?": [Eny], [tsy manana tiany], [No]
(Q2) "Mino ve ianao fa ny mpikaroka tokony havela hanohy amin'ny fanandramana izany?": [Eny], [Eny, fa-pitandremana], [tsy azoko antoka], [No]
Rehefa avy mametraka ny fanontaniana tsirairay, ny mpanome dia manome sehatra iray ahafahan'izy ireo manazava ny valintenin'izy ireo. Farany, ireo mpanadihady - iza no mety ho mpandray anjara na olona mandray olona avy amin'ny tsenan'ny laboratoara microtask (oh: Amazon Mechanical Turk) - mametraka fanontaniana fototra ara-demografika (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Ny fanadihadiana ara-tsosialy momba ny fitsaboana dia manana endrika telo izay tena mahafinaritra ahy. Voalohany, mitranga izy ireo alohan'ny hanaovana fandalinana iray, ka noho izany dia afaka misoroka olana izy ireo alohan'ny hanombohan'ny fikarohana (raha manohitra ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fanehoan-kevitra). Faharoa, ny mpangataka amin'ny valim-panadihadiana etika dia matetika tsy mpikaroka, ary izany dia manampy ireo mpikaroka hahita ny fianarany amin'ny fomba fijerin'ny vahoaka. Farany, ny fanadihadiana ety anaty valim-panontaniana dia ahafahan'ny mpikaroka manangana dika maro amin'ny tetik'asa fikarohana mba ahafahana manombana ny fandanjana ara-moraly amin'ny dikan-teny samihafa amin'io tetikasa io. Ny fetra tokana, na izany aza, ny fanadihadiana ety anaty valim-panontaniana dia ny hoe tsy mazava tsara ny fomba hanapahana hevitra eo amin'ny sehatry ny fikarohana samihafa vokatry ny valin'ny fanadihadiana. Na izany aza, na dia eo aza ireo fetra ireo, dia toa manampy ireo fanadihadiana ara-pananahana; Raha ny marina, ny tatitra nataon'i Schechter and Bravo-Lillo (2014) dia mandao ny fandinihana kasaina hatao ho setrin'ny ahiahy natsangan'ny mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana ara-tsosialy.
Raha toa ny fanadihadiana ara-etetika dia mety hanampy amin'ny fanombanana ny fanehoan-kevitra amin'ny fikarohana natao, tsy afaka mandrefy ny mety hitranga na ny henjana amin'ny hetsika tsy mifanaraka. Ny iray amin'ireo fomba fijerin'ny mpikaroka ara-pitsaboana mikasika ny tsy fahazoana antoka amin'ny toe-java-manahirana lehibe dia ny fanatanterahana fitsapana mitam-piadiana - fomba iray izay mety hanampy amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Rehefa mandinika ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina vaovao ny mpikaroka, dia tsy mitsambikina avy hatrany amin'ny fitsaboana maromaro misy taratra. Manana karazana fianarana roa aloha izy ireo aloha. Amin'ny voalohany, amin'ny fotoam-pitsarana ahy, ny mpikaroka dia tena mifantoka amin'ny fitadiavana dôsily azo antoka, ary misy ireo olona maromaro ireo. Raha vantany vao voamarina ny dosis azo antoka, dia manombana ny fitsaboana ny zava-mahadomelina ny fizotran'ny dingana II. izany hoe ny fahaizany miasa amin'ny toe-javatra tsara indrindra (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Vantany vao vita ny fikarohana I sy II, dia zava-mahadomelina vaovao azo raisina ho marimaritra iraisana amin'ny fitsapana fitsabahana goavana. Na dia tsy tena tsara ho an'ny fikarohana ara-tsosialy aza ny fatran'ny fitsapam-pahaizana efa nampiasaina tamin'ny fampivoarana zava-mahadomelina vaovao, dia mety ho afaka hianatra fohy kokoa ny mpikaroka raha ny marina no mifantoka amin'ny fiarovana sy ny fahombiazana. Ohatra, miaraka amin'i Encore, azonao eritreretina fa ireo mpikaroka dia manomboka amin'ny mpandray anjara any amin'ireo firenena manana lalàna goavana.
Miaraka amin'ireo fomba efatra ireo-ny fari-pahaizana tsotra indrindra, ny fanadihadiana momba ny hery, ny fanadihadiana momba ny fitsaboana ary ny fitsapana fitsapana - dia afaka manampy anao amin'ny lala-masaka, na dia eo aza ny tsy fahazoana antoka. Ny tsy fahatokisana dia tsy mitarika ho amin'ny tsy fandraisana andraikitra.